Archive du 20180828
“1er tour dia vita” 2001, 2006, 20…
Kandida ofisialy amin’ny fifidianana filoham-pirenena i Marc Ravalomanana.
Kandida maromaro hamondron-kery Hitaky fanemorana ny fifidianana…
Ny 7 novambara 2018 no daty voafaritry ny lalàna hanatanterahana ny fifidianana filoha ary efa samy manana ny laharany ao anatin’ny biletà tokana avokoa ireo kandida.
Haingo Rasolofonjoa Tsy tongatonga ho azy io “N°1” io
Lohalaharana ny kandida Haingo Rasolofonjoa ao amin’ny biletà tokana. Kandida anisan’ny tanora ary mpikambana tao amin’ny AREMA.
Andriamparany Radavidson « Aoka ny mpitondra ho azo fehezina ! »
Tsy mbola fotoana filazana praograma izao, hoy ny kandida ho filoham-pirenena natolotry ny antoko politika FFF, Andriamparany Radavidson, tetsy amin’ny Le Pavé Antaninarenina omaly.
Fifidianana amboletra Tokony hihetsika ny mpahay lalàna
Namoaka fanambarana omaly ry zareo avy eo anivon’ny antoko “Faneva de Madagascar pour le Développement et la Démocratie (FMDD)”
Andry Rajoelina Miezaka manadio ireo mpomba azy
Mihetsiketsika mafy ny filohan`ny tetezamita teo aloha amin`ny fitsidiham-paritra hisehosehoana. Miha akaiky tokoa ny datim-pifidianana filoham-pirenana.
Arlette Ramaroson Manohitra ny fitrandrahana tsy ifampierana
Tofoka tanteraka amin’ny tsy fetezan’ny fitantanana ny firenena Ramatoa Arlette Ramaroson, kandidà ho filohan`ny Repoblika.
Hampidi-kizo indray ! ?
Manahoana ry Jean a ! Ahoana ny fiatrehana ny fifidianana ao e ? Mailaka ery ianareo mampiasa izato filaharana ao anaty bileta tokana izato.
Nadine Ramaroson Ny tsiambaratelon’ny nahafatesany
Fito taona katroka anio talata 28 aogositra no nahafaty ny minisitry ny mponina tamin’ny tetezamita Nadine Ramaroson, noho ny loza an-dranomasina raha avy niatrika fety tany Sainte Marie nihazo an’i Soanierana Ivongo ny 28 aogositra 2011.
Fanodinana fako, angovo, jiro Hiara-kiasa ny CUA sy ny OIF
Mitohy ary hiha-matotra hatrany ny fiaraha-miasa eo amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) sy ny fikambanana iraisam-pirenen’ny Frankôfônia.
Fifidianana filohan’ny FMF Hotanterahina amin’ny 27 oktobra 2018
Efa namolavola daty hanatanterahana ny fifidianana izay ho filoha vaovao hitantana ny FMF “Federasiona Malagasin’ny Baolina kitra”
Volley-ball ASIEF 2018 Raikitra ny fiadiana ny amboara
Taorian’ireo lalao famaranana tenisy notontosaina tamin’ny heriny teny amin’ny kianja filalaovana tenisy eny Ankatso ka natrehan’ny filohan’ny Antenimirandoholona ka nahafantarana an’ireo tompondakan’ity taranja ity eto Analamanga toa an-dry Hanitriniony Lanto UA (Simple Dames),
Basikety katita Malagasy Ny Critérium U12 no handimby ny Championat U14
Nifarana ny alahady 26 aogositra teo tany Nosy-Be Hellville ny fiadiana ny ho tompondaka nasionalin’ny taranja basikety sokajy U 14 zazalahy sy zazavavy.
Tsy kapoaka ahontsana akory !
Miisa 36 ireo kandida ho filoham-pirenena. Efa mitovy amin’ny mahazo ny lisi-pifidianana nanomboka tamin’ny 15 mey lasa teo iny. Ny tian-kambara dia hoe : tsy azo ovaina intsony.
Mitohy ny tolon’ny SYFEMA Tsy handray anjara amin’ny BEPC
Nanao fanambarana ny SEMPAMA Nosy ny faran’ny herinandro teo fa hampiato ny tolona ho fitsinjovana ny zaza Malagasy ary hampianatra maimaimpoana ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana BEPC amin’io herinandro ho avy io.
Adina ara-panatanjahantena bakalorea Tsy nomena “convocation” ireo tsy nahaloa ekôlazy
Notanterahina nanomboka omaly alatsinainy 27 aogositra ny adina ara-panatanjahantena Bakalôrea ho an’ny sokajy rehetra. Hifarana ny 7 septambra ho avy izao ny eto an-drenivohitra.
Mozika vokatry ny tany Tsy ampy ny fampahafantarana azy, hoy Rajery
Hanolotra seho miavaka etsy amin’ny Le Taxi Be Antanimena ny sabotsy 1 septambra izao ny andrarezin’ny valiha Malagasy, Rajery.
Fanafihana mitam-piadiana 8 maty voatifitra sy voatsatoka antsy
Lehilahy roa mpiasan’ny orinasa fiambenana G4S no indray maty tetsy amin’ny La Gastronomie Pizza eny amin’ny By Pass omaly maraina tokony ho tamin’ny 2 ora vokatry ny fanafihan-jiolahy.
Faritra Atsimon’i Madagasikara Mbola manjaka ny tsy fanjarian-tsakafo
Tonga omaly alatsinainy 27 aogositra ary nihaona tamin’ny praiminisitra Ntsay Christian teny Mahazoarivo ny talem-paritry ny fandaharan’asa iraisam-pirenena momba ny sakafo (PAM) aty Afrika atsinanana, Ramatoa Lola Castro.